Nezvedu | ZHEJIANG KAIHUA MOLDS CO., LTD
Yakazara Plastiki Mould Solution Inotengesa
Akatungamirwa muChina Zhejiang Province, Kaihua ine mahofisi emapazi manomwe kuAsia, Europe, neAmerica, achipa rubatsiro kune vanopfuura mazana maviri negumi nevatengi. Kuburikidza nepamusoro-soro uye pfupi-kutenderera zvigadzirwa zvigadzirwa, Kaihua yakagadzira mukurumbira wepamusoro-soro uye mutengi-anotarisisa masevhisi ekugadzira pamusoro peyakaitika makore makumi maviri. Kaihua inodada nekuzivikanwa seyakakwira-magumo Yakagadzirwa muChina brand.
Bhizinesi raKaihua rinotangira pamotokari, zvekurapa, uye logistics kumumba fenicha nemidziyo yemagetsi, vachizvirova masimba ekugadzira anopfuura seti 2000 seti yevhu pagore. Iine huwandu hwese hweanopfuura mamirioni mazana masere nemazana mashanu eRMB, avhareji yegore yekutengesa inowedzera ye25%, vashandi ve1600, uye maviri ekugadzira mafakitori anosvika zviuru gumi zvemamirimita, Kaihua haangori chete wepamusoro mugadziri muChina, asi mumwe weakakura mould vatengesi pasi rese .
Yakagadzwa muna2000 naDaniel Liang, Kaihua ave mumwe weakanakisa jekiseni epurasitiki muforoma vatengesi munyika, achipa masevhisi mukugadzira, kugadzira, kugadzira, uye kuungana kwemhando yepamusoro yekushandisa.